Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Eran Stern | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Eran Stern
Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Eran Stern
Eran Stern oo ku jira istuudiyaha. (isha: Natasha Newrock-Stern)
Baahinta Beat ee “NAB Show New York Profiles ”waa wareysiyo taxane ah oo lala yeelanayo xirfadlayaal caan ah oo ka tirsan warshadaha wax soo saarka kuwaasoo ka qeyb galaya NAB Show New York (Oktoobar 16-17, 2019).
Eran Stern oo u dhashay Israel, oo aan dhowaan ku raaxeystey wareysiga, waa macallin aad u baahsan, af-hayeen, muusig, iyo khabiir ku xeel dheer naqshadeynta iyo filimada soo-saarka kadib. Laakiin, halkan, waxaan u oggolaan doonaa Stern inuu naftiisa ku barto ereyadiisa. Waxaan ahay nashqadeeyaha mooshinka leh in ka badan 25 sano oo khibrad ah. Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan xooga saarayay baridda iyo qorista waxbarashada. Dhiirrigalinta noloshayda waa fanka iyo muusigga. Waxaan sidoo kale jeclahay daawashada dadka tareenka saaran. ”
Xiisaha Stern ee muusigga iyo farshaxannimadu wuxuu bilaabay yaraantiisii. "Sheekadayda jacaylka leh ee muusigga waxay bilaabatay markii aan ahaa 12-jir xilligii ugu sarreeyay ee Maxi-Singles 80s," ayuu sharraxay. “Diiwanada duubitaanku waxay u adeegeen sidii daaqada farshaxanka casriga ah, gaar ahaan kuwa sumadaha indie sida diiwaanka Mute iyo ZTT. Waxaan xasuustaa iibsashada albumyada kaliya sababtoo ah waxaan jeclaaday daboolka diiwaanka. Dabaqa kore ee Eric [sawirka hoose] waa hal tusaale oo wanaagsan.
The Dabaqa kore ee Eric daboolka albumka.
Jacaylka aan u qabo buugaagta iyo filimada wuxuu ka yimid sawirka. Waxaan isticmaali jiray rinjiyeynta iyo sawir gacmeedka tan iyo yaraantaydii-5 sano-waxaanan sawiray tanno majaajillo ah oo ay dhiirrigeliyaan inta badan joornaalada Marvel iyo DC Comics iyo waliba sheekooyin naxdin leh oo uu qoray Stephen King Markii sheekooyinkaas la waafajiyay filimka, ayaan daawan jiray habeen iyo maalin. Si aan balwadeyda u sii adkeeyo, waxaan u weecday suugaanta, tanina waxay abuurtay wareeg aan dhammaanayn oo sii socota ilaa hadda. ”
Marka la eego xiisaha farshaxankiisa, waxaa la yaab leh in la barto in Stern uusan ku weynayn farshaxanka waxbarashadiisa tacliimeed. “Markii ugu horreysay waxaan bartay Maareynta Ganacsiga maxaa yeelay waxaan u maleynayay inay tahay inaan helo xoogaa waxbarasho culus oo iga caawin doonta nolosha 'dhabta ah, sidaa darteed waxaan ku haystaa BA qaybtaas. Laakiin markaa waxaan xaqiiqsaday in aan sameynayo wax aanan jeclayn oo aan dan ka lahayn, markaa kadib 10 sano oo aan u ahaa maamule iib Autodesk, Waxaan go’aansaday inaan dib u qiimeeyo noloshayda oo waxaan goostay inaan qalbigayga raaco oo aan barto naqshadeynta. Aniga oo ah qof is-bartay, waxaan ku bilaabay keligay, oo sannado yar ka dib ayaan ku biiray Shenkar halkaasna ku dhammeeyay shahaadada naqshadeynta garaafka. Kadib 12 sano ayaan halkaas joogay oo aan wax ka dhigayay oo aan maamulayay qaybta Motion Graphics. ”
Marka la eego wadada wareega ee Stern ku soo dhowaatay waayihiisii ​​faneed, waxay muujineysaa in xiisaha uu u qabo filimada sidoo kale wuxuu ka yimid meel aan laga filayn. Aniga oo ka mid ah howlahaygii ciidanka Israel, waxaa waajib igu aheyd in aan sameeyo video tababar ah oo sharaxaya isticmaalka qalabka indhaha ee haanta dhexdeeda. Tan iyo markii aan ka imanayay rinjiga iyo sawir qaadashada asalka ah, waxaan adeegsaday Agaasime Macromedia-kani wuxuu ahaa 1991-kii waxaanan abuuray filim animated gaagaaban. Waxay ahayd caqabad weyn in dib loogu daabaco fiidiyowga waxaanan ku dhameynay duubista shaashadda kombiyuutarka. Laakiin dadaalku wuu uqalmay. Waxaan helay darajadayda waxaanan kaloo ogaaday inaan helay aaggaygii. Waxaan rajeynayaa inaan ku sii fiicnaanayo marba marka ka dambeysa. ”
Ugu dambeyntii Stern wuxuu go’aansaday inuu bilaabo meheraddiisa, SternFX. “Ganacsigu wuxuu ku bilowday laba sababood oo waaweyn. Marka hore, yareynta nabaad-guurka aan u geysto macallin ahaan. Waxaan ogaaday goor hore in haddii aan ku sii socdo sicirkan, tamarteydu si dhakhso leh ayay u dhammaan doontaa, waxaanan raadiyay waddo aan ku ilaaliyo koorsooyinka aan baray, taas oo ii horseeday aragtida hore ee ah inaan isdiiwaangaliyo naftayda wax dhigista, sidaasna aan u ilaaliyo tamarta oo ka dhig mid ay heli karaan dad badan intii suurtagal ah. Sababta labaad waxay ahayd waxoogaa shakhsiyadeed; Waxay ahayd inaan abuuro dakhli dheeri ah. Xaaskeyga waxaa ku dhacay cudurka kansarka mana shaqeyn karin mar dambe. Mas'uuliyadda maaliyadeed ayaa keligey saarneyd aniga, waana inaan raadsado waddo aan ku keeno mushahar kale intii aan ku jiray, anigoon guriga ka tegin.
Tallaabada xigta ee isbeddelka xirfadeed ee shirkadda Stern waxay ahayd inuu iska iibiyo tababare ahaan iyo lataliye ku saabsan saamaynta muuqaalka. “Waxaan ku dabaqay mabda 'ah inaan albaabka cag soo galo,' oo macnaheedu yahay waxaan si fudud alaabtayda ugu soo bandhigay qof kasta oo aan aqaan, in yar oo reer chutzpah ahna waan sii waday ilaa aan ka helayo laydh cagaaran. Isla markii qof fursad i siiyay, waxaan sameeyay wax walba oo aan kari karayay si aan xawaaraha u ilaaliyo oo aan u taagto mowqifkayga. Marka la soo koobo, ma jiro wax karinayo sixir ah oo halkan ku yaal - isku-dhafnaan adkaysi, xiriiro yar iyo, sida wax kasta oo nolosha ka mid ah, waqti fiican iyo nasiib. Macaamiishayda dhexdooda, waxaan ka magacaabi karaa kooxaha sawirada caalamiga ah ee ka socda Disney, Machadka Weizmann, iyo Adobe, iyo sidoo kale wakaalado fara ku tiris ah oo ka shaqeeya hay'adaha warbaahinta, kuwa wax tabiya, iyo guryaha boostada. "
Ku darsiga Stern ee 2019 NAB Show New York waxay noqon doontaa labo aqoon isweydaarsi, "Focus On: Typography & Title Design" iyo "Compositing with After Effects and Cinema 4D," oo labadaba la soo bandhigi doono iyada oo qayb ka ah Shirka Post / Production. Markii iigu horeysay ee NAB Show wuxuu ahaa 22 sano ka hor isagoo ka qayb galayaal ah. Kadib, 2005, waxaan baray kulankeygii ugu horreeyay ee shirka Post / Production World. Had iyo jeer waan xasuusan doonaa Ben Kozuch, madaxweynaha iyo la-aasaasaha Mabaadiida Warbaahinta ee mustaqbalka, oo i siisay fursadii iigu horaysay. Wixii markaas ka dambeeyay, waxaan qayb ka ahaa kooxdii soo saarta dhacdada, oo sii wad hadallada NAB iyo shirarka kale. NAB Show waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu sameeyo xiriirada cusub laguna xoojiyo shabakadaha jira, waxaanan wali aaminsanahay inay tahay showga ugu muhiimsan sanadka.
“Qoraalku inta badan waa cunsurka ugu muhiimsan ee mashruucyada fiidiyowga ah, laakiin inbadan ayaa dhayalsata dhibaatooyinka ka dhasha keenista waraaqaha nolosha. Casharka ugu horeeya, waxaan diirada saari doonaa Qaab-qoraalka iyo Naqshadaynta Cinwaanka, oo waxaan soo bandhigi doonaa farsamooyin kala duwan oo lagula shaqeyn karo nooca 'After Effects'. Waxaan sidoo kale tusi doonaa sida la isugu daro qoraalka iyo fiidiyowga ka dib Raadka si loo abuuro muuqaallo cajaa'ib leh. Qoraalka 3D sidoo kale waa wax weyn, sidaa darteed waxaan soo saari doonnaa iftiin, qaabab, iyo qoraal nooleyn ah, waxaanna ku dari doonnaa waxyaabo kale oo 3D ah. Waxaan sidoo kale waqti u hurayaa ligatures, indent, kerning, glyphs. Kalfadhigan laba-geesoodka ah waxaa loogu talagalay qof kasta oo raba inuu sameeyo nooc la akhrin karo oo qurux badan isla markaana lagu nooleeyo Ka dib Raadka.
“Kalfadhiga curinta, waxaan ku soo bandhigi doonaa sida loo hagaajiyo qalabka ka soo baxa Shineemo 4D anigoo caawinaad yar ka helaya Ka dib Raadka. Tusaale ahaan, waad go'doomin kartaa cunsurrada, waxaad ku shaqeyn kartaa baasaabo kala duwan, waxaad isticmaali kartaa nidaamka Qaadashada, iyo xitaa kaamerooyinka iyo nalalka dhoofinta. Tani waxay gacan ka geysan kartaa in lagu ganaaxo natiijada heerka boostada, iyada oo aan loo baahnayn in dib loo bixiyo mar kasta oo aad rabto inaad isbeddel sameyso. Waxaa sidoo kale jira saameyn lagu dabaqi karo marxaladda boostada si wax ku ool ah. Kulankaan, waxaad ku baran doontaa farsamooyin kala duwan si loo hagaajiyo loona dedejiyo halabuurkaaga. Dhamaan waad ku mahadsantahay isdhexgalka adag ee udhaxeeya Ka dib Dhibaatooyinka iyo C4D. Kalfadhigan waxaa loogu talagalay qof kasta oo raba inuu waxyaabo 3D ah ku daro fiidiyowga oo uu ku soo qoro boostada. ”
Marka laga hadlayo himilooyinka mustaqbalka ee Stern, wuxuu ii sheegay in mudnaanta uu siinayo ay tahay sida soo socota. Abuur cinwaanno badan oo khadka tooska ah ah oo ku qoran Ingiriis iyo Cibraaniga. Wax ku baro shirarka, oo ka caawi dadka sameynaya tillaabooyinkooda ugu horreeya ee naqshadeynta dhaqdhaqaaqa iyo naqshadeynta. Noqo aabe wanaagsan iyo nin reer leh. Sii wad inaad oroddo oo aad dhageysato muusikada iyo, tan ugu muhiimsan, caafimaad qab, dhoolla caddee, oo la soco liiskeyga ciyaaraha ee 'Netflix.'
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2019 NAB Show Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Idaacadan Convention Broadcasting Convention Eran Stern Mabaadiida Warbaahinta ee mustaqbalka NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB16 nabshow Shenkar SternFX 2019-10-09
Previous: Wax ka duwan Hadalka Fudud (iyo Xaqiiqda ah in "loo Malaynayo inay Madadaalo tahay") ee NAB New York
Next: NAB Show New York: FOR-A si loo iftiimiyo ugu dambeeyay Production Live